Mayelana nathi - AlorAir
crawlspace futhi engaphansi yethu amayunithi futhi babe nezici ikilasi ehola ezifana isilawuli digital, ukufinyelela okulula, plug-n-play izingxenye ngisho oludidiyelwe condensate futha ku ovundlile crawlspace unit yethu! Engeza lezi zici, compact design engasindi, ongakhetha ahlukahlukene filtration, ukulawula ababephelezela akude ongakhetha, zalamaqembu.I uzobe ezijatshulelwa ze amakhasimende.
AlorAir imikhiqizo babe izitifiketi ezahlukene kuye ngokuthi ukusebenzisa kwabo okuhloswe okuhlanganisa izinketho Energy Star, CE, ETL SAA, SGS futhi TUV. Imikhiqizo yethu zenzelwe, futhi yahlolwa ukuze ukuthathelwa umshuwalense eliphakeme izinga kumakhasimende ethu. Onjiniyela bethu bayaqhubeka ibenze imvilophi amazinga ukusebenza entsha kanye nezici ukujabulisa amakhasimende ethu.
Sithunywe ukuba njalo ukusungula ahlinzeke imikhiqizo kangcono ekugcineni ukubaluleka. AlorAir uthembisa ukusebenzisa engcono izinsiza, ubuchwepheshe, imishini nangemva-ukudayiswa ukweseka ukwenza lo msebenzi waba ngokoqobo amakhasimende ethu.